‘बेलकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउँन रातारात डकुमेन्ट भेडेटार पुर्‍याइयो’ - हाम्रो शब्द
‘बेलकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउँन रातारात डकुमेन्ट भेडेटार पुर्‍याइयो’
रामधुनी । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउँन रातारात डकुमेन्ट (कागजपत्र) भेडेटार पुर्‍याइएको उपमेयर राजकुमारी चौधरीले दाबी गरेकी छिन् ।
गएको साउनमा नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपमेयर चौधरीले राजीनामा दिने घोषणासहित फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि जनता आन्दोलित बनेका थिए । बेलका नगरपालिकाविरुद्ध जनताले आन्दोलन गरिरहेका बेला (गएको साउनमा) भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटाउँन रातारात डकुमेन्ट भेडेटार पुर्‍याइएको उपमेयर चौधरीले बताएकी छिन् ।
हाम्रो शब्दसँगको एक अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आफुसँग नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण रहेको र आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्धा हाल्नेसमेत चेतावनी दिएकी छिन् ।
गएको साउनमा भएको आन्दोलन र त्यसबेला डकुमेन्ट भेडेटार पुर्याइएको घटनालाई पुष्टि गर्न उनले भनिन्, ‘यता (बेलकामा) ३,४ दिन आन्दोलन भइराखेको छ । उता रातारात भेडेटार लगेर डकुमेन्ट मिलाइराखेको छ । गाडि रिजव गरेर गाइघाटबाट उहाँ (भेडेटार) पुर्‍याइएको छ डकुमेन्ट ।’
भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै उनी थप्छिन्, ‘यौटा खरदारको तलब २२, २५ हजार हुन्छ, त्यो खरदारको करोडौँको सम्पति कहाँबाट आयो ? छ महिनामा फेरी अर्को घडेरी झुम्कामा किन्ने पैसा कहाँबाट आयो ?’
‘बेलकामा कार्यरत खरदार धमाधम घडेरी किन्न थाले ?’ भन्ने हाम्रो शब्दको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘धमाधम ! तपाई कतिपय कर्मचारी (बेलकामा कार्यरत) गएर हेर्नुहोस्, धमाधम घडेरी किनरहेको छ, घर बनाइरहेको छ । कहाँबाट आउँछ ? त्यहि २० हजार २२ हजार (तलब भन्न खोजिएको) बाट पुग्छ ?’
कानुनी प्रकृया पुर्‍याइएर भ्रष्टाचार भइरहेकोसमेत उपमेयरको भनाई छ । १ गाडी डकुमेन्ट भेडेटार लगेर रातारात मिलाए भ्रष्टाचारको प्रमाण मेटेको उनको दाबी छ ।
डकुमेन्ट मिलाउँने कर्मचारीको संख्या नै तोकर उनी भन्छिन्, ‘१० दिन, १५ दिनसम्म मिलाएका छन् ६ जना कर्मचारीले ।’ सामान्तवादको प्रबृतिका कारण मेयर दुर्गाकुमार थापाले आफुलाई सधैँ दवावमा राखेको उनको आरोप छ ।
८ कक्षादेखि अनेरास्ववियूमा राजनीति गरेको, महिला संगठन, महिला मानवअधिकारवादी रक्षक सञ्चालमासमेत काम गरेर आएका कारण आफु त्यतिकै चुप लागेर नबस्ने उनको भनाई छ ।
बाहिरबाट हेर्दा बेलका हाइहाई देखिए पनि भित्र खोक्रो रहेको चौधरी बताउँछिन् । कृषि, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको उनको दाबी छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा आफुलाई एक्ल्याइएको उनी बताउँछिन् ।
आफुले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेदेखि मेयरसँग बोलचालसमेत टुटेको र सम्बन्ध बिग्रिएको चौधरीको भनाई छ । आफुले राजीनामा दिन्छु भनेपछि पार्टी (नेकपा) ले कुरा सच्याउँन लगाएको र पार्टीको दवावका कारण आफु कुरा सच्याउँन बाध्य भएको उनी बताउँछिन् ।
बेलका नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मसँग छ : उपमेयर चौधरी (अन्तर्वार्ता)
बेलकाका मेयर–उपमेयरबीच बोलचालन नै बन्द